Waxyaabaha La Isweydiiyo - Shenzhen Xinyuanjiaye Technology Co., Ltd.
Saamiyada, waqtiga hogaaminta waa ilaa 7 maalmood. Soosaar ballaaran, waqtiga hogaamintu waa 20-30 maalmood kadib marka la helo bixinta debaajiga. Waqtiyada hogaaminta ayaa dhaqan gala marka (1) aan helno deebaajigaaga, iyo (2) waxaan heysanno ogolaanshahaaga ugu dambeeya alaabadaada. Haddii waqtiyadeena hogaaminta aysan ku shaqeynin waqtigaaga kama dambeysta ah, fadlan ka gudbo shuruudahaaga iibkaaga. Xaaladaha oo dhan waxaan isku deyi doonnaa inaanu ku haqabtiro baahiyahaaga. Xaaladaha badankood waan awoodnaa inaan sidaas yeelno.
Miyaad damaanad qaadeysaa gaarsiinta amaan iyo aamin aamin ah ee alaabooyinka?